XOG RASMI AH: RW Sharmaake oo Malaayiin Dollar ka gudoomay dawladda Imaaraatka Carabta & Dagaal rasmiga ah oo ka bilowday Muqdisho… | Shacabka Puntland	Monday, February 20th, 2017	Home
XOG RASMI AH: RW Sharmaake oo Malaayiin Dollar ka gudoomay dawladda Imaaraatka Carabta & Dagaal rasmiga ah oo ka bilowday Muqdisho…
Jan 13, 2017 - Post View: 13,636
Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa dadaal adag ugu jira sidii uu ku noqon lahaa Madaxweynaha dawladda cusub ee Soomaaliya, isagoo nooc kasta oo taageero ah ka helaya dawladdaha caalamka qaarkood, gaar ahaana dawladda Imaaraatka Carabta.
Warar ku dhaw dhaw Mr, Sharmaake ayaa xaqiijinaya in uu ka helay dawladda Imaaraata Aduun lacageed oo fara badan, kaas oo saameyntiisa laga dareemayey doorashadii u dambeysay ee guddoonka baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya.
Mr, Sharmaake ayaa ciyaaray yool kasta oo uu ku gaari karroo Madaxweyne-nimada Soomaaliya, wuxuuna dagaal adag la galayaa Madaxweynaha magacaabay Xasan Sheekh Maxamuud.
Wararku waxay sheegayaan in lacagta uu hadda haysto Sharmaake ay ka badan tahay middii hory loo saadalinayey, waxaana kal hor lagu gudoonsiiyey dalka Kenya lacag gaaraysa 27$ Malyan oo dollar, taas oo loogu talo-galey in uu kula dagaalamo Cabdirashiid Maxamed Xidig.
Qorshaha koowaad ayaa meelmar ka noqday dhinaca baarlamaanka Soomaaliya, markii ay codkooda si aqlabiyad ah ku soo saareen Prof Maxamed Sh Cisaan Jawaari oo kamid ahaa raggii ay taageertay dawladda Imaaraatka Carabtu.
Kala xod-xodashada Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa meel sare gaartay, waxaana lafilayaa in ay dhinacyada Siyaasiintu Lacag fara badan galiyaan codadka Xildhibaanada baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya.